Cyper- Tuugada Aladaha Casriga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cyper- Tuugada Aladaha Casriga
La daabacay fredag 3 juli 2015 kl 13.35
Waxaa aad u soo badanaya weerada cyber ka oo ah dadka dhaca ama tuugda internet ka iyo aaladaha casriga ah sida computers ka iyo telephonada.
Waxaa aad u soo badanaya weerada cyber ka oo ah dadka dhaca ama tuugda internet ka iyo aaladaha casriga ah sida computers ka iyo telephonada. Faldanbiyeedyada noocan ah ayaa lagula kacay hay’ado ay ka mid yihiin kuwa dawlada iyo gacansataba ba. Waxaayahaba loo dan leeyay ayaa waxa ka mid file ama macluumad ku jira computer da iyo in laga dhigo encrypted ama mid aan la akhriyi Karin lana isticmaali Karin cidii xidhay mooyane computer da muhiimka ah ee ay hay’adahani leeyihiin
Bishii march ayaa waxa weerarada cyper ka lagula kacay xafiiska dawlada ee gobolka Stockholm , iyada oo loo isticmaalay barnaamij la yidhi Ransomware oo ka dhigay macluumaadkii computerda ugu jirey mid aan la akhriyi Karin. Nyström oo ah maamulka xafiisa farsamada casriga ee xafiiska gobolka Stockholm ayaa yidhi.
Waxa kaliya ee aan ogahay waa in aanu aragnay fariin yar oo qoraal ah oo leh hadii aad doonaysaan in file shiina la iidin furo waa in aad bixisaan lagacta intaa leeg. Anagu waxanu nahay xafis dawaladeed mana laga yaabo in aanu cago juglayn wax ku bixino.